Cunnooyinka giraangiraha waxay hagayaan xilliga Thanksgiving - Cunnada on Wheels
Cunnooyinka Cunnadu waxay hagayaan xilligii Thanksgiving-ka
Haddii aad raadineyso qaab aad dib ugu celiso Thanksgiving ama aad raadineyso agabyo cunno gaarsiin ah, aqri si aad u aragto fursadaha Cunnooyinka Cagaaran ay ku bixinayaan xilligan Thanksgiving.
Haddii aad rabto inaad dib u bixiso give
1. Socda si aad u Dhamayso Gaajada
Habka ugu xiisaha badan ee lagu taageero Cuntooyinka Lugaha Dhimashada Thanksgiving-kan ayaa kaqeyb qaadanaya Walk to End Gaajada! Socodka Dhammaadka Gaajada waa socod qoys oo saaxiibtinimo leh oo ka dhaca subaxa Thanksgiving-ka Xarunta Ganacsiga Mareykanka. Dhacdadani waa mid hagaagsan haddii aad carruur leedahay oo aad raadineyso dhaqan qoys oo cusub oo aad ku bilowdo. Kaliya caruurtu ma baran doonaan cashar qiimo leh oo ku saabsan wax siinta dadka kale, laakiin sidoo kale waxay helayaan waqti fiican oo ay ku ciyaarayaan aagag badan oo "madadaalo ah" oo la dhigay dhammaan Mall! Socodku sidoo kale wuxuu ku siinayaa faa iidada ah inaad ku siiso fursad aad ku firfircoonaan karto oo aad u diyaariso rabitaanka cuntada weyn maalinta dambe. Waa habka ugu wanaagsan ee wax loo bixiyo ka hor intaadan mahad celin! Dhammaan lacagta la soo ururiyey waxay u socotaa Cuntada Lugaha Lugta, waad iska diiwaan gelin kartaa inaad ku socotid Cuntada Lugaha halkan. Haddii aadan awoodin inaad sameysid, tixgeli inaad iska diiwaangeliso "hurdo-wade" ama ugu deeqaya metroo Meals on Wheels team.
2. Gaarsiinta cuntada
Inta badan barnaamijyada xubnaheennu waxay bixiyaan cunnooyinka mahadnaqa ee dib loogu kululeeyo Maalinta Thanksgiving inta lagu gudajiro maalmaha horukacaya Thanksgiving. Mid ka reeban ayaa ah CES Meals on Wheels oo ku taal Minneapolis, oo fulinaysa isla maalin gaarsiin. Haddii aad xiiseyneyso tabarucid inaad kubixiso cunnooyinka nawaaxiga Minneapolis ee CES Maalinta Thanksgiving, sidaa darteed dadka waayeelka ah wali waxay heli karaan cunno diiran, oo nafaqo leh maalinta Thanksgiving, waxaad ka wici kartaa 612-870-1125.
3. Ku deeqo
Meals on Wheels marwalba waxay aqbashaa tabarucaadka si aan u taageerno shaqadeena ah inaan siino waayeelka iyo kuwa naafada ah naafada ah, cunno nafaqo leh. Haddii aad rabto inaad gacan ka geysato dadaalladeena waad awoodaa ugu deeqo Cuntada Lugaha halkan.
Macluumaadka ku saabsan helitaanka cuntada
Haddii adiga ama qof aad jeceshahay aad macmiil ka tahay Meals on Wheels oo aad qabtid su'aalo ku saabsan sida loo helo cunnooyinka kulul ee Thanksgiving, hoos waxaa ku yaal dhowr ikhtiyaar oo adiga kugu habboon.
1. Cunnooyinka mahadcelinta ee shaagagga
In kasta oo ku dhowaad dhammaan barnaamijyada cunnada metrooga ee 'Wheels Wheels' aysan geyn cunno kulul Thanksgiving, waxaa jira hay'ad gaar ah oo si gaar ah uga shaqeysa inay dadka siiso cunno kulul maalinta Thanksgiving. Cunnooyinka Thanksgiving ee Wheels waxay bixiyaan cunto diiran oo mahadnaq ah oo ay ku jiraan turkey, labbis, baradho, iyo dhammaan waxyaabaha kale ee wanaagsan. Adeegani waa u diyaar dhammaan dadka u baahan - maahan kaliya waayeelka. Haddii aad xiiseyneyso inaad ku hesho Cunnada Thanksgiving ee Wheels waxaad kala xiriiri kartaa 651-699-5404 wakhti kasta ka dib Nofeembar 1.
2. Kuwa hadda cuntada qaata
Dhammaan barnaamijyada Cunnada ee Wheels waxay bixin doonaan ikhtiyaar cunto dheeraad ah oo loogu talagalay dadka qaata ee la soo gaarsiiyo horraantii usbuuca si ay weli ugu sii cunaan Thanksgiving. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan sida aad u heli doonto cunnooyinka inta lagu jiro usbuuca Mahadcelinta, la xiriir barnaamijka Meals on Wheels ee xaafaddaada ama Metro Meals on Wheels oo ah 612-623-3363.
Nofeembar 8, 2017